တဂျီးး သို့ စတစ်ကီ ရိုက် – Sticky | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တဂျီးး သို့ စတစ်ကီ ရိုက် – Sticky
Posted by ဇီဇီ on Aug 4, 2014 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes, How To.., My Dear Diary | 65 comments
စတစ်ကီ ရိုက်(စ) လို့ ခေါ်တဲ့ ကောက်ညှင်းနဲ့ လုပ်တဲ့ ထမင်းတို့ မုန့်တို့ အကြောင်း ရေးမို့ပါ။
စားရတာ ကပ်စီးကပ်စီးနဲ့မို့လေ။ အဟီးဟီး
တဂျီး သတင်းစာမှာ သုံးချင်သုံးလို့ ရအောင် ရေးတာမို့ တဂျီးသို့ လို့ ဦးတည်တာ။
၇ ရက် လုံး လုပ်စားဖို့ ပြောတာဟုတ်ဘူးနော်။
တော်ကြာ ဝမ်းနည်းစရာတွေဖြစ်ကုန်မယ်။ ဟိ။
စတစ်ကီ ရိုက်(စ) ချုပ်ချက်က ၁၁ လောက် ရှိ။
အရင်ဆုံး ပေါင်းကြမယ်။ ပြန်ပေါင်းကြမယ်နော်။ လူဦးရေနဲ့ လိုက်ပြီး အချိုးပြင်နော်။
သများ မှတ်ထားသလောက် ကို ပြောမှာ။
ကောက်ညှင်းဆန် – နို့ဆီဘူး ၄ လုံး
ပဲလွန်းစေ့ – နို့ဆီဘူး ၁ ဘူး
နှမ်းလှော် – နို့ဆီဘူး တစ်စိတ်
မပေါင်းခင် ညကို ကောက်ညှင်းတွေကို ရေစိမ်ထားပါ။ (ဒီက ဆန်က အဲလို စိမ်ရတယ်)
မနက်ကျ ပဲလွန်းစေ့တွေကို နူးအောင်ပြုတ်ထားပါ။
စိမ်ထားတဲ့ ကောက်ညှင်းဆန်ကို ပဲစေ့တွေနဲ့ ရောပြီး ပေါင်းအိုးးး (သို့) ရိုက်(စ) ကွတ်ကာရဲ့ ပေါင်းချောင်ထဲကို ထည့်ပါ။
အဲဒီ ပေါင်းချောင် အပေါက်က ကျမယ် မမှတ်နဲ့ မကျဘူးးး။ (သင်ပေးတဲ့ အမ ပြောတုန်းက မယုံဘူးး)
ပြီးရင် ပေါင်းအိုးထဲထည့်ပြီး ခလုတ်နှိပ်ထားလိုက်ပါ။
ခလုပ်တက်တဲ့ အချိန် နပ်မနပ် လက်နဲ့ဖျစ်ပြီး စမ်းကြည့်။ (အပူလောင်မှာ သတိထားဦးနော်)
မနပ်သေးရင် ရေးလေးပြန်ဖြန်းပြီး အပေါ်အောက် လှန်ပြီး ပြန်ပေါင်းထားးး။
ဟုတ်ကဲ့။ သော့ချက်က လာပါပြီ။
ကောက်ညှင်းပေါင်းကျက်ရင် ဇလုံထဲကို သွန်ချပြီး လက် ဒါမှမဟုတ် ယောင်းမ ကို ဆီသုပ်ပြီး နာနာရိုက်ပေးမှ……အလွန်စားကောင်းတဲ့ ကောက်ညှင်းပေါင်းဖြစ်လာသတ္တံ့။
(အနော်တောင် ယောင်းမကို ဆီသုပ်မလားလို့။ ဇော်သန့်ကို ကြောက်လို့သာ။ ဟိ။ အဲလို ယောင်းမ မဟုတ်ဘူးနော်)
ပြီးရင် နှမ်းလှော်နဲ့ ဆားထောင်းထားတာလေးဖြူးပြီး ငါးခြောက်ဖုတ် ဒါမှ မဟုတ် ငါးကြော် ဒါမှ မဟုတ် ကြက်သားကြော် ဒါမှမဟုတ် (အဲ စားချင်တာတွေ အကုန်ပြောမိနေပြီ) အဲ။ အဲဒါတွေနဲ့ စားကြတော့နော်။ ဟိ။
ခုနက အချိုးကို ပေါင်းတဲ့ထိ ရပြီးရင်….
အုန်းသီးကို ခြစ်ထားတဲ့ အဖတ်တွေနဲ့ သကြားနဲ့ ထည့်နယ်၊ အုန်းရည် နည်းနည်းလေး ဖြန်းး
ပြီးရင် ၁၅ မိနစ်လောက် ပြန်ပေါင်းလိုက်ရင် ကောက်ညှင်းပြန်ပေါင်းရပြီ။
ငှက်ပျောသီးကြော်လေး စားးး … ဟိ။
၃) ခေါပြင် (စဉ်းစားရင်း စားချင်လာတာ)
ကောက်ညှင်းဆန် – ၁ ပြည်
ဆီ – ၁၀ သား
နှမ်းလှော် – နို့ဆီဘူး ၂ ဘူး
အခွံချွတ် မြေပဲလှော် – နို့ဆီဘူး ၂ ဘူး
အုန်းသီး – တစ်လုံး
ကောက်ညှင်းကို ပေါင်းပြီးသည်အထိ (၁) နဲ့ တူတူ (ပဲမပါဘူး)။
ကောက်ညှင်းနပ်ရင် ဆုံနဲ့ထည့်ထောင်းး၊ ရေလေး နည်းနည်းထည့်ပြီး ဆုံကို ဆီသုတ်ပြီး ထောင်းရင် မကပ်ဘူးးး။
ကောက်ညှင်းအဆန်ပျောက်ပြီး ညက်ရင် သံလင်ပန်း၊ ပန်းကန်ဇောက်နက်နက်ကျယ်ကျယ်လို့မျိုးမှာ ညီနေအောင်ဖြန့်လိုက်ပါ။
လက်ကို မကပ်အောင် ဆီလေး ဆွတ်ဆွတ်ပြီး ကိုင်ပေါ့။
မညက်တညက် ထောင်းထားတဲ့ မြေပဲနဲ့ နှမ်းလှော်ကို နှံ့အောင်ဖြူးပြီး သစ်သား ဒလိမ့်နဲ့ လှိမ့်ပေးရင် မြှုပ်သွားမှာ။
ခဏနှပ်ထားတုန်းး အုန်းသီးခြစ်ပြီး ပြီးရင် လိုသလောက် ထည့်ပြီး စားပါလေ။
ဘူးသီးကြော် ဒါမှမဟုတ် ကြက်သွန်ကြော် ဒါမှမဟုတ် တို့ဟူးကြော် ဒါမှမဟုတ် (ဟင်းးး ရပ်မှ) အဲ အဲဒါတွေနဲ့ တွဲစားပါခင်ညာ။
အဲဒီ ခေါပြင်က ပုန်းသွား အဲလေ ခြောက်သွားရင် ခေါပုတ် ပါတဲ့။ (အဲဒီထိတော့ လုပ်တာ မမြင်ဖူးဘူးးး)
ခေါပုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ရေထည့်မထောင်းရဘူးတဲ့။ နှပ်ရင်လည်း နှမ်းထောင်းနဲ့ပဲ နှပ်သတဲ့။
ထန်းလျှက် – ၇၀ ကျပ်သား (ရွှေထမင်း)
သကြားး – ၇၀ ကျပ်သား (ငွေထမင်း)
ထန်းလျှက်ကို ကျိုထားတဲ့ အရည်ပျစ်ပျစ်နဲ့ ကောက်ညှင်းပေါင်းနဲ့ မွှေပြီး ဆီသုပ်ထားတဲ့ လင်ပန်းထဲ ထည့်ပြီး ညီအောင်ဖြန့်။
ပူမှာနော်။ ယောင်းမ ၂ ယောက် (အဲလေ) ၂ လက်နဲ့ မွှေရောပြီးမှ ထည့်။
ပြီး ရင် အအေးခံပြီး အေးတဲ့ချိန် ကြိုက်တာ ပုံစံလှီးပြီး အုန်းသီးလေးဖြူးစားပေရော့။
ငွေထမင်း အတွက် က ထန်းလျှက်နေရာကို သကြားရည်နဲ့ ထည့်လုပ်လိုက်နော်။
ကောက်ညှင်းဆန် – ၄ ဘူး
အုန်းသီး – တစ်ခြမ်း
သကြား – စားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်း
အုန်းသီးညှစ်ပြီး အုန်းနို့ ယူထားလိုက်ပါ။ ဦးရေ ပန်းကန်လုံး တစ်လုံးဆို ရပါပြီ။
ကောက်ညှင်းကို ပေါင်းပြီးသားကို အုန်းနို့နဲ့ ထည့်ပြီးနယ်ထားပါ။
အုန်းသီးဖတ်တွေကို သကြား ဆားနဲ့ ဖွဖွလေး နယ်ထားပါ။
ငှက်ပျောဖက်ကို ရေဆေးပြီး ပျော့သွားအောင် အရွက် မပျက် ရေနွေးဖျောထားပါ။
ပြီးရင် ဖက်ကို ကန်တော့ပုံလုပ်။ ကောက်ညှင်းအုန်းနို့ နယ်ထားတာကို ထည့်ပြီး ဖက်ကို ခေါက်ပိတ်၊ သွားကြားထိုးတံလေးနဲ့ မပွင့်လာအောင် ထိုးထားး (ဝါးခြမ်းစိတ်မှ မရှိတာကြီးကို)
ပြီးတော့ မီးသွေးမီးနဲ့ စကာပေါ် တင်ပြီး အကျက်ညီအောင် ကင်ပြီး စားလို့ ရပါပြီ။ ရှလွတ်။
၆) မုန့်ဖက်ထုတ် အနီ
ဆန် – နို့ဆီဘူး ၂ လုံး
ထန်းလျှက် – ၅၀ ကျပ်သား
ဆန် ၂ မျိုးကို ပေါင်းကြိတ်။
ရေစစ်သွားရင် ထန်းလျှက် ပျစ်ပျစ်ကျိုထားတာနဲ့ နယ်ထားပါ။
ငှက်ပျောဖက် ကို ဆီသုပ် ပြီး နယ်ထားတဲ့ ဟာတွေထည့်ပြီး ခပ်ပြားပြားလေးထုပ်ပြီး ပေါင်းချောင်ထဲ ထည့်ပေါင်းပါ။
ဟိုဘက်ဒီဘက် လှန်ပြီး ပေါင်းတာ အညီကျက်သွားပါက စားလို့ရပါပြီ။
၇) ကောက်ညှင်း ဆီထမင်း
ပုစွန်ခြောက် – ၅ ကျပ်သား
ကြက်သွန်နီ – ၁၀ သား
ကောက်ညှင်းဆန်ကို ရေဆေးပြီး စစ်ထားပါ။
ဒယ်အိုးထဲ ဆီထည့်တည်ပြီး ကြက်သွန်နီ ပါးပါးလှီးနဲ့ ဆနွင်း ထည့်ကျော်ပါ။
ကြက်သွန်ကြွတ်ရွလာရင် ဆယ်ပြီး သပ်သပ်ဖယ်ထားပါ။
ပြီးရင် ကောက်ညှင်းဆန်ထည့်ပြီး ရေမြှုပ်အောင်ထည့်ပြီး ဖုံးထားပါ။
ရေခမ်းပေမဲ့ ကောက်ညှင်းမကျက်သေးရင် ရေနွေးထပ်ဖြန်းပြီး အထက်အောက်လှန်ပြီး အဖုံးပြန်အုပ်ပါ
ကောက်ညှင်း နပ်ရင် ဒယ်အိုးကို ပတ်ပတ်လည်လှည့်ပြီး မီး အပူပေးး ကောက်ညှင်းဂျိုးရအောင်။
ဂျိုးရရင် သံယောင်းမ နဲ့ ကော်ပြီး ဟိုဘက်လှန်ပြီး ပြန်နှပ်။
စိတ်ကြိုက် အခြေအနေမှာ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့်လေးဖြူးပြီး စားလို့ ရပါပြီ။
၇ ရက် ၇ မျိုးရေးမယ် ဆိုပြီး သာ ရေးလိုက်တာ……
အမှန်က အနော့ ဆီမှာ မုန့်ဖုတ်တဲ့ အာဗန် အရှိဝူးးး၊ မိုက်ခရိုဝေ့ပဲ ရှိတယ်။
ပြီးတော့ ပရက်ရှာကွတ်ကာ မရှိ၊ ရိုက်ကွတ်ကာပဲ ရှိ။
အဲလော့ စိတ်ရှိတိုင်း မစမ်းသပ်နိုင် မစမ်းသပ်ရဲ။
အဲ နောက်တစ်ခု က အချင်အတွယ်က အရင်က မှတ်ထားတာတွေက ဂလိုတွေ။
ကွကိုယ်ဆို ထင်ရာမြင်ရာ ချက်ရဲတယ်။ သူများကို ပြောလို့ အတိအကျပြောနေရတာ၊
အဲဒီတော့ ကွကို unitကွန်ဘာ့ လုပ်ကြကုန်..!!!
တစ်ပိသာ = ၁ ဒသမ ၆ ကီလို ဂရမ် ကျော်ကျော်လေး ရှိတယ်။
၁၀ သား = ၁၆၀ ဂရမ်လောက် ရှိမပေါ့။
ကောက်ညှင်းနဲ့ လုပ်တဲ့ ဖုတ်တဲ့ မုန့်တွေ ကျန်သေးတယ်။
အဲဒီတော့ ဒီ အောက်မှာ စာရင်းရေးလိုက်မယ်နော်။
သိတဲ့သူက ပြောပြပေးသွားနော်။ နော်။
၇) ကောက်ညှင်း ဆနွင်းမကင်း
ဒါ က မွသဲ ရဲ့ ပြည်ကြီးငါးနဲ့ ကောက်ညှင်းပေါင်းကို ချက်တဲ့ဟာ။
ပြည်ကြီးငါး ကောက်ညှင်းပေါင်းသွပ် (credit to TNA)
ပြည်ကြီးငါးအိပ်ကလေးတွေကို သန့်စင်ပါ။ အလည်ကကျောရိုးထုပ်ပါ။
ကျွန်မကတော့ အိပ်လိုက်ထားပြီး လက်ပါတဲ့ခေါင်းကိုဖြုတ်ထားပါတယ်။
သန့်သွားပြီဆိုရင် ကောင်ညှင်းပေါင်းအဖြူကို အိပ်တ၀က်လောက် ထည့်ပါ။
ချက်တဲ့အချိ်န် (သို့) ပေါင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ကျူံ့သွား ရင် ကောက်ညှင်းတွေ ကွဲထွက်ကုန်ပြီးမလှ လို့။
ထိပ်ကနေ သွားကြားထိုးတံလေးနဲ့ပိတ်ပါ။ ကျွန်မကတော့ အရသာမထည့်ပါဘူး။
ပေါင်းမယ်ဆိုရင် ဒီအဆင့်မှာပဲ ဆီလေးသုတ်ပြီးရေခံပေါင်းလို့ရပါပြီ။
အဲ ဆီပြန်ချက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကြက်သွန်ဖြူထောင်းပြီး သားကိုဆီသတ်ပါ။
နွမ်းသွားပြီဆိုရင်တော့ အစောကအစာသွပ်ထား တဲ့ပြည်ကြီးငါးတွေစီထည့်၊ ရေနဲနဲလေးထည့်၊ မီးအေးအေးနဲ့ အဖုံးအုပ်တည်ပါ။
အရသာထည့်ပါ။ လိုအပ်ရင်ခပ်ဖွဖွမွှေခြင်း ( သို့ ) အိုးလှုပ်ခြင်းပြုလုပ်ပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးမထည့်ရပါဘူး။
ကျက်ပြီဆိုရင်တော့ ဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့တင်းနေတဲ့ ပြည်ကြီးငါးကောက်ညှင်းပေါင်းသွပ်ရပါပြီ။
၀က်သားကောက်ညှင်းထုတ်ရာသီဖြစ်နေလို့ အခုတလော နေရာတိုင်းမှာ တွေ့နေရတယ် ..
အဲဒါလေး လုပ်ပြီး ပို့စ်တင်မလားစဉ်းစားနေပေမယ့် ၀ယ်ရမှာတွေများနေလို့ မလုပ်အားသေးဘူးဖြစ်နေတယ် ..
ကောက်ညှင်းဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်လုပ်ကြိုက်တယ် ..
လုပ်ပြီးသားလေးတွေများ လက်ဆောင်ပေးရင်ဖြင့် …………
အဲဒီ လုပ်နည်း ရှာသေးတယ် ဝေရဲ့။
ခက်လို့ ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်တာနဲ့ ချန်ပြစ်ခဲ့တာ။
လုပ်ပြီးရင် ပို့(စ) တင်ပေးနော်။
စီးတီးမတ်မှာ တစ်ထုပ်ကို ၁၃၀၀ ကျပ်ဆိုလို့ ဈေးကြီးတာနဲ့ ကိုယ်တိုင်လုပ်မလို့ စဉ်းစားနေတာ ..
၀ါးရွက်က တရုတ်တန်းမှာသွားဝယ်မှရမှာမို့လို့ …
ဒီအပါတ် ပိတ်ရက် လုပ်ဖြစ်ဖို့များတယ် ..
အဆင်ပြေရင် ပို့စ်တင်မှာပါ ..
ဒီမှာတော့ အဲဒီ ဝါးရွက်ကိစ္စမှာတင် ဝယ်စားရမှာ ပိုတန်တယ်ဖြစ်သွားတာ။
ခုက မလေး ဟာရီရိုင်ယာ ကာလ ဆိုတော့ မုန့်တွေမှ အမျိုးမျိုးပဲ။
ဒီတစ်ပတ်ပိတ်ရက် လုပ်ပြီး ခေါ်ကျွေးမယ်ဆိုပိုကောင်း
စတစ်ကီဆိုတာရယ် သို့တဂျီး ဆိုတာရယ်ကိုကြောက်ပြီး ဘယ်သူမှဝင်မဖတ်ရဲဘူးထင်တယ် ဟေးဟေး ………
သများမှာ ခေါင်းပူအောင်စဉ်းစားပြီး ပေးထားရတာ။
သူများတွေ ပို့(စ) တဂျီးကို ခေါင်းစဉ်တပ်ရင် လူပိုဝင်တတ်လို့ အတုခိုးထားရတာကို။
(စတစ်ကီ ရိုက် အစားများလို့ပါ။)
နည်းတွေကိုစုံလို့.. ကောက်ညှင်းပြန်ပေါင်း..၀က်ကောက်ညှင်းထုတ်..ကောက်ညှင်းခွက်ကြော်..ကောက်ညှင်းကျည်တောက်ကြိုက်အိ.. လုပ်စားဖို့တော့ အားမွေးလိုက်အုန်းမယ်.. ပို့စ်တော့ကူးထားတယ်..
စတစ် (အဲလေ) ကောက်ညှင်းကြိုက်သလား ခွစ်။
ဒီမှာတော့ မလေးတွေလုပ်ရောင်းတဲ့ ကောက်ညှင်းမုန့်တွေ အများကြီးးး၊
တို့တွေ လျှာ နဲ့ အရသာတည့် တယ် ခေါ်မယ်။
ညကကို စတစ်ကီရိုက်စ်ခွက်ကြော်စားလို့ သတိယပြီး ဓာ့ပုံတောင်ရိုက်ထားလိုက်သေး..
ကိုယ်တွေ့မို့ ချစ်လို့ သတိပေးတယ် မှတ်ပါ။
ယူ သိတ်တတ်နိုင်တာပဲ တိယား။
သူကြီးကိုများ စတစ်ကီ နဲ့ ရိုက်တော့မလားလို့ ကွယ်။
ကျွန်တော်က သိတ်ဝမ်းနည်းတယ်တယ် တိယား။
၀မ်းနည်းခြင်းကို ဖြစ်စေသော ကောက်ညှင်းတွေကို
တား သိတ်မုန်းတာပဲ မေမေ။ ဟေးဟေး။
စီစီခင်ဇော်ကြီးသာ ဒီပို့စ်ထဲပါတဲ့ ကောက်ညှင်းဆိုင်ရာအစားအစာတွေကို
ယူလည်း တတ်တိကောင်းဒါဘဲ တိယားးးး
ခင်ဇော်ကျွေးတဲ့ စတစ်ကီ စားမယ်ဆိုပဲ။
နာရီကြည့်ထားတာ တစ်နာရီအတွငါး သူရဲကောင်းနှစ်ယောက်ပေါ်လာလို့
အပ်စိုက်ပြီး တူနဲ့ ထုမယ်။
ဖောင်ဖျက်လို့ မရရင် ပြင်ပလိုက်မယ်။
အဲ့ ဦးဆာမိကြီးက တိတ် နောက်တာပဲ။
လူမိုက် ယောက်ခမွက လူနောက်။
ကောက်ညှင်းဆို ကျုပ်က အလွန်ကြိုက်..
(တကယ်တော့ ဘယ်စားစရာမဆို အလွန်ကြိုက်..)
မိဘ လူကြီးတွေပြောတာတော့ ရှမ်းလူမျိုးက ကောက်ညှင်းကြိုက်သတဲ့…
ကျုပ်ဖြင့် ရှမ်းလမ်း မှာနေလာတာ တော်တော်ကြာပြီ
ကျုပ်ပါးစပ်က ထောက်ခံနိုင်လောက်တဲ့ ကောက်ညှင်းပေါင်းမျိုး လုံးဝ မတွေ့ ….
အစားအစာကို ဖြစ်သလိုလုပ်ရောင်းရင်လဲ ရောင်းရတာပဲ ဆိုတဲ့ခေတ်ရောက်လာတော့
တစ်ချိန် (၁၉၇၀-၁၉၈၈) က အစားအသောက်နာမည်ကြီးတဲ့
(တခြားမြို့နယ်များကကို တခုတ်တရ လာစားရတဲ့)
ဒီရွာက လူတွေ သွေးမနည်းဘူး ဆိုတာ ယုံပြီးသားပါ ဦးပါ။
အမှန်တော့ စတစ်ကီ Rice (Glutinous Rice) က ဘာအရသာမှ မရှိဘူးရယ်။
ရောထည့်ရတဲ့ ဟာလေးတွေ ကို လိုက်ပြီး ….
အရသာပိုလေးအောင် လုပ်နိုင်လို့သာ စားနေရတာ။
နမ္မတူနေတုန်းက အိမ်တိုင်း က ခေါပြင်လုပ်စားတာ ထမင်းစားရေသောက်ပဲ။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီဟာကို မန်းလေးမှာ စားတဲ့အခါ အရသာ အပြည့်မရပြန်ဘူးးး၊
ကာလ ဒေသနဲ့ လိုက်ပြီးလည်း အရသာက ကွာတတ်သေးတယ် ထင်ပါရဲ့။
သကြားကို ဘေးမဲ့ပေးပါခည :s:
ကောက်ညင်းကျည်ထောက် ( ဒီအရပ်အခေါ် ကောက်ညင်းခဲတံချောင်း ) လုပ်နည်းလေးသိရရင် ကောင်းမယ်နော်။
ကောက်ညှင်း ဆန်ကို ရေစင်စင်ဆေး၍ တစ်ည ရေစိမ်ထားပြီး ရေစစ်ပါ။ တင်းဝါးများကို တစ်ဖက်ပိတ် ဖြတ်ထားပြီး ဆယ်ယူထားသော ကောက်ညှင်းဆန်များကို ထည့်၍ ရေအပြည့် တည်ထားပြီး ဖုတ်၍ ရပါသည်။
ဖုတ်လိုသောအခါ အလယ်တွင် မြေကြီးကို မီးလင်းဖိုသဖွယ် အရှည် ကိုက် တူးပြီး ၀ါးတန်းတစ်တန်းတွင် တစ်ဖက်တစ်ချက် ကောက်ညှင်းထည့်ထားသော ၀ါးများထောင်၍ ဖုတ်ရပါတယ်။
ကောက်ညှင်းများနပ်လောက်လျှင် ထိပ်ဝများကို ကောက်ရိုးများဖြင့် ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါ။ ကောက်ညှင်းကျည်တောက်များ မတူးမခြစ်စေရန် ဖုတ်နေစဉ် လှည့်ပေးပါ။
ကျက်သောအခါ အပေါ်ယံရှိ အမြှေးများကို ဓားနှင့် ပါးပါးလွှာပစ်ရပါ မယ်။ ဖြူဖွေးသောကောက်ညှင်းကျည်တောက်များ ရပါတယ်။ကောက်ညှင်း အဖြူအချိတ် (သို့မဟုတ်) နှစ်မျိုး တစ်ပိုင်းစီထည့်၍ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
(Credit Myanmar Foods And Desserts, October 31, 2012)
သများက မဝင်းခိုင်​ဆို​တော့ စတစ်​ကီ​တွေကို ​ရှောင်​တယ်​.. ဒါမယ်​.. ဆီထမင်းနဲ့ ဝက်​သား​ကောက်​ညင်းထုပ်​ ကြိုက်​တယ်​..
စားပြီး ဆေးသောက်ရင် ရပါတယ်။
အမကတော့ ဆန်နဲ့ လုပ်တဲ့ မုန့်တွေထက် ကောက်ညှင်းနဲ့ လုပ်တဲ့ မုန့်တွေ ပိုကြိုက်တယ်။
အဲ့နာမည်ကြားရင်ကို..ရင်တွေ ဘာတွေ ခုန်နေပြီ… ။
အဲဒီနာမည်ကို…မြင်ရင်… ဖွေးဖွေး ဆိုတဲ့နာမည်ကိုမြင်ရတာထက်…
ထိုင်း အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာတော့ ဆန်အစား ကောက်ညှင်းအစားလေ့ကြတယ်…
ကြက်ကင်နဲ့ ကောက်ညှင်းပေါင်းကတော့ သူတို့ရိုးရာပေါ့… ဟင်းနဲ့လည်း တို့စားကြတယ်
သင်းတို့ကို ဝမ်းခိုင်တယ်ပြောရင် ဟားကြသဗျ… အဟွတ်
ကောက်ညှင်းဆိုရင် ကျောက်စ်ကတော့ လှော်စာကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ… အဟိ
ကျောင်းသားဘဝတုန်းက ကွင်းဆင်းရင် ကဇော်ဖောက်ပြီးသောက်တယ်…
ကောက်ညှင်းကိုချက် အိုးသန့်သန့်မှာထည့် တဆေးနဲ့ရောပြီး…
အမှောင်ထဲမှာ ၄ရက်လောက် နှပ်ထားရင် အနံလေးကို မွှေးနေတာပဲ ။
သောက်ခါနီးမှ သကြားရည်လေးရော ဂလုလိုက်ရင် … ဂေ့… ကြာလေကောင်းလေ
ကျနော် က လှော်စာ မမြည်းဖူးဘူးးး
တရုတ်တွေလည်း ကောက်ညှင်းကိုချုပ်တယ်ပြောတာ မယုံကြဘူးးး။
ရွာမှာဘုရားပွဲဆို မုန့်ဖက်ထုပ် 100 -150 လောက်ထိ
မိဗုံကတော့ ကိုယ်စားမဲ့အထုပ်ကို ငှက်ပျောရွက်အ၀ါရောင်လေးတွေနဲ့
ဒီ တစ်ခေါက်လူကြုံ နဲ့
မုန့်ဖက်ထုတ် ၁၀၀ မျိုး ၂၀၀ မျိုးလောက် ထုပ်ပြီး ပို့ပေးပါနော်။
စာ ကြမ်းပိုး says:
ကြားဖူးတယ်။ မဟုတ်ရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါနော်။
ခွေးကို မသတ်ခင် ကြိုးနဲ့ ချည်ထားပြီး
ရေထဲမှာလည်း ၀မ်းနှုတ်ဆေးတွေ ထည့်တိုက်တာတဲ့။
ခွေးက အစာလည်းမစားရ၊ ၀မ်းကလည်း တဗျစ်ဗျစ်သွားလိုက်တော့
အူထဲမှာလည်း ဘာမှ မရှိတော့တဲ့ အချိန်မျိုးပေါ့။
ခွေးကလည်း ငတ်ကြီးကျနေတဲ့ အချိန်ဆိုတော့
အားရပါးရ လွှတ် စားတော့တာတဲ့။
အဲဒီတော့မှ ခွေးကို သတ်ပြီး ခွေးအူကိုထုတ်တာတဲ့။
စားလို့လဲ ကောင်းတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်
နာ့ ဂို ခွေးသားစားခိုင်းတာ ဘူတုန်းကွ။
အဲ့ဒါမိုးကို ချင်းတောင်အရမ်း အေး တဲ့ ဘက်တွေမှာ စားကြတယ်လို့ပြောတယ်။
အဲ.။ သများက ဒါရိုက်တာ ရင်နဲ့ အကြောင်းပါလို့ ကိုရီးယားရောက်မှပဲ မြည်းတော့မယ်။
ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ ခွေးသားတွေစားမိတတ်ပါတယ် ။
ကောင်းးးးးး မှ ကောင်းးးးးးးးးးး
ကောက်ညှင်းဟေ့ လို့ ဆိုလိုက်ရင်
ရှမ်းမြောက်မှာနေတုန်းက ဂလုခဲ့တဲ့ …ဟို ဗဂျီဆြာ နာမည်နဲ့ အရည်ပဲ ပြေးပြေးမြင်နေတာရယ်ဗျာ…
ပြန်လာမယ် ပုံပြောခဲ့တဲ့ ဂီဂီကိုလည်း မုန်းတယ်။
မင်ဂါဒုံလေဆိပ်က ထိုင်ခုံတွေလည်း မုန်းတယ်။
ဒီလအတွက်.. ပုံနှိပ်ပါမည်.. လို့…။
ဇီမမပွိုင့်တွေကို.. ရွာသူားခရီးသွား.. ဘတ်စ်ကားခအတွက်.. ဂဇက်ရင်းနှီးမတည်ငွေအဖြစ်သုံးပါမည်..။
သဘောတူတယ် မပြောရသေးခင် ဆုတောင်းကြီး မြင်လိုက်တော့ ဘာပြောရတော့မတုန်းးး
ကွဲသွားတဲ့ ထောပတ်အိုးဂျီး ဘုရားလှူရုံပေါ့ ဘဂျီးရယ်။
အာဟိ အာဟိ အာဟိ
(အဆိုပါ ကော်မန့်အား ဆိုက် စည်းကမ်းနှင့်မညီပါက ဖျက်နိုင်ပါသည်)
ခုန က ပဲ ဒီ သီတင်းရလိုက်တယ်။
ဖေဖေ့ကို ဘယ်သူသွားတိုင်တာတုန်းကွ ဟေ!!
တစ်ခုခု မကျေနပ်ရင် အဖေကို ပြေးပြေးတိုင်ပြီး အဖေက ရန်ဖြစ်ပေးရတဲ့ ခေးတွေကို မြင်ယောင်ပြီး တနားထာ.။
အစားအသောက် အကြောင်း တင်တာတောင်
ဘေးမလွတ် ရန်မလွတ် အန်ဒရယ် မလွတ် ဘူးလားး
ဇီဇီ့ ကောက်ညှင်းတွေအကုန်ကြိုက်။ ခေါင်းစဉ်မြင်တော့ ဒို့အရေးအော်ရမှာလားလို့လက်ဆန့်ဝင်လာတာ။ အဲ့မွှားလို့ လွမ်းလို့အပြေးအဖြန်းဝင်လာတာပေါမို့ပါ။ ဟိုဟာတွေချိဒယ်။ သင်တန်းတက်တုန်းက တခါမှလုပ်မစားဖြစ်ဘူး။ ပို့စ်တပုဒ်ထပ်တင်မလား စုပေးမယ်။ ဘယ်ပို့ရမလဲဟင်
ယောက်ခမွသဲ လည်း ကြိုက်တယ်လားးး
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး ထွက်မပြေးတာ တော်သေးးး
ဟိုဟာတွေ ပို့ချင်ရင် လိပ်စာအသစ်ပေးပါ့မယ်။
ဒီနေ့ စက်ရုံဖွင့်ဖွင့်ချင်း ပက်ကင်စက်ပျက်နေလို့ စိတ်နောက်ပြီး တစ်နေကုန် စက်ရုံထဲရွာလည်နေတာ
ခုမှခန တက်လာဖြစ်တယ်…နောက်မှပြန်လာအုံးမယ်…တားတားလည်း ၀မ်းနည်းမှာတော့ကြောက်တယ်
အသောက်သမားဆိုတော့ ၀မ်းမမှန်တာနဲ့ ဒုက္ခကိုရောက်ရော…ဒါပေသိ ကောက်ညှင်းနဲ့စားစရာတွေတော့ကြိုက်ပါတယ်… :s:
ဒီမှာ ရွာမလည်ပဲ စက်ရုံထဲ ရွာလည် နေတယ်ပေါ့။
ကောက်ညှင်း ကို ကောက်တေးနဲ့ တွဲပြီး ကျွေးလို့မှ မစားရင် ကောက်ပလိုက်မှာ။
ဟီဟိ..ဟိုနှူးဘာ မိဂီပြောတဲ့ အရည်လေးသောက်ချင်ထှာအေ
ပိုက်ပိုက် သဂျီးက အတင်းအလှူခံသွားသဖြင့်တော့ ၀မ်းနည်းပါ၏ ခိခိ
အလှူဒါယိကာမကြီး …ဟီဟိ ခေါ်လို့ကောင်းထှာ
တစ်ချို့က ဆဲ လို့ ကောင်းနေတယ်။
ကျိန်စာ ဝ လေ လှ လေ ဆိုပဲ။ (ခွက်ဒစ်တူ တုန်တုန်)
ဒီ ဘာဘာ တဂျီးရဲ့ ရွာဂျီးကို မချိချင်ဒေါ့ဘူးးး
သများက အပျော်လုပ်တာတွေကို အတည်ပေါက် လိုက်ခံစားနေကြတယ်။
သများ အရမ်းဝမ်းနည်းတယ် သိလားးး
ဒို့ဝါးခယ်မမှာလေ …ဘယ်မြို့မှာမှ မရောင်းတဲ့ အုန်းကောက်ညှင်းဆိုတာရှိတယ်။အုန်းသီးခြစ်ရယ် ပုဇွန်လှော်ရယ်နဲ့ စားရတာ သိပ်ကောင်း။
ကောက်ညှင်းကိုအုန်းနို့နဲ့ ဒယ်အိုးထဲ ဆီထမင်းထိုးသလို ချက်ပြီး အဲဒီဒယ်အိုးကိုမီးပေါ်ပစ်ထားရင် အောက်က ဂျိုးတူးသွားရော။
အုန်းကောက်ညှင်းသည် ဒေါ်ကျင်သိန်းဆိုင်မှာ မနက်ဆို ကလေးတွေ တန်းစီပြီး အုန်းကောက်ညှင်း တမတ်ဖိုး ဂျိုးပါအောင်ထည့်ပေးပါ လို့ ပြောဝယ်ခဲ့ရတယ်။
အဲဒီအဒေါ်ကြီးက အုန်းကောက်ညှင်းရောင်းရတဲ့ ၀င်ငွေနဲ့ သမီးကို တက္ကသိုလ်ပို့နိုင်တယ်။ရွှေတွေညွတ်အောင် ဆင်နိုင်တယ်။
Thank you so much for this post, Aunty Don.
Second Favourite Food for Our Town ‘s Breakfast
ဇာတိကို ချစ်သူတိုင်း ဇာတိမှ ဆွေမျိုးသားချင်း အသိမိတ်ဆွေများ ၊ ဇာတိမှ မြင်ကွင်း ၊ အကြောင်းအရာများ ၊ စားသောက်ဖွယ်ရာများကို ပိုမိုသတိရတတ်ကြသည် ။
ထိုအထဲတွင်မှ ငယ်စဉ်ကတည်းက ပေါင်းဖော်ကြသော မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ ၊ ငယ်စဉ်ကတည်းက သွားလာ လည်ပတ်ဆော.ကစားခဲ့သော နေရာများ ၊ ငယ်စဉ်ကတည်းက စားသောက်ခဲ့ဖူးသော ဒေသထွက် စားသောက်ဖွယ်ရာများသည် မည်သည်.အချိန်ရောက်သည်ဖြစ်စေ သတိရစမြဲပင် ။ အချို.အသက်ပိုကြီးလာလေ ခွဲခွာချိန် ပိုကြာလာလေ ပိသတိရတတ်ကြလေ ဖြစ်သည် ။ ဤ ထဲတွင်မှ အချို.သော စားသောက်ဖွယ်ရာတို.က မိမိတို.ကျင်လည်ရာ တွင်ရှာဖွေရရှိတတ်သော်လည်း အချို.ကတော. ဇာတိ မြေတွင်သာ ရတတ်သည် ။ အမှန်ကတော. ထိုအစားအသောက်ဆိုသည် ကလည်း မိမိဇာတိတွင် မိမိသူငယ်ချင်းများနှင်.ထိုင် ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်ပြောရင်း မြို.လေးရဲ. လေကိုရှု မြို.မြင်ကွင်းများကိုကြည်.ရင်း စားသောက်ရသည်.အရသာနှင်.ကတော. လုံးဝတူမည်မဟုတ် ။
မြို.လေးတွင် မနက်စာမုန်. စားကြသည်.အထဲတွင် ၀ါးခယ်မ မုန်.ဟင်းခါးပြီးလျှင် ဒုတိယ သတိအရတတ်ကြဆုံး မုန်.တစ်ခုရှိသည် ။ ကောက် ညှင်းဖြင်. လုပ်သော မုန်.ဖြစ်ပြီး အခြားနေရာများတွင် သူနှင်.ဆင်တူသော မုန်.မျိုးသာရတတ်သည်ကများသည် ။ မြို.လေးတွင်သူ.ကို အုန်းကောက်ညှင်းဟု ခေါ်ကြသည် ။ နေရာအတော်များများတွင် ရတတ်သော ကောက်ညှင်းပြန်ပေါင်းနှင်.ဆင်တူသော်လည်း သူက ချိုး ခံကာ ကြော်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဆီထမင်းနှင်.ဆင်တူသည် ။ ဆီထမင်းက ဆနွင်းထည်.ခြင်းဖြစ်ပြီး သူက အုန်းနို.ထည်.ခြင်းသာ ကွာသည် ။ သို.သော် ဆိထမင်းက နှမ်းထောင်း ၊ အုန်းသီးစသည်တို.ဖြင်. စားရပြီး သူကတော. ၄င်းတို.အပြင် ပုဇွန်လှော်ပြီးထောင်းထားသည် ကိုပါ ထည်.စားရခြင်းဖြစ်သည် ။
မြို.သို.အလည်ပြန်သူများအနေဖြင်. မိမိတို.မိတ်ဆွေများကို ဝေငှ၇န် ဒယ်အလိုက် ရန်ကုန်သို. မှာယူသယ်ဆောင်သွားကြသည်အထိ ဆွဲဆောင်အားကောင်းသော မုန်.တစ်မျိုးလည်းဖြစ်သည် ။ မြို.ပြန်ရောက်ကြသူများ မနက်စာစားလျှင် မုန်.ဟင်းခါးကိုအကြော်စုံနှင်.စား အုန်းကောက်ညှင်းကို လဘက်ရည်နှင်.သောက် ဆိုသည်က တွဲဖက်စားလေ.ရှိသည်. Breakfast Style ပင်ဖြစ်သည် ။ ပြောသာပြောရသည် ။မြို.လေးတွင်ပင်လျှင် မနက်ပိုင်းရောင်းသည်.အသည်က ၂ သည်ထက် မပိုပဲ ဈေးသွားနောက်ကျလျှင် မရတတ်သော မုန်.လည်းဖြစ်သည် ။ ဟိုးအရင်ကတော. ဒုံးပျံအောင် ထိဆိုင်ရှေ.နားတွင်ရောင်းလေ.ရှိပြီး ယခုတော. မုန်.ဟင်းခါးတန်းအတွင်း တစ်သည်နှင်. လိုက်ရောင်းလေ.ရှိသည်.တစ်သည်ခန်.သာရှိပါသည် ။
တစ်လက်စတည်း မိတ်ဆွေများ အနေဖြင်.လည်း မိမိတို.မြို.လေးတွင် ထိုအုန်းကောက်ညှင်း ရှိ/မရှိ နှင်. ရှိလျှင်လည်း အခေါ်အဝေါ် တူ/မတူ ကို Comment Box တွင် မှတ်ချက်ပေးရင်း ဒေသန္တရ ဗဟုသုတ ဖလှယ်ရာလည်း ရောက်မည်ဖြစ်ပါသည် ။
မြို.လေးဆီက အချို.သော မုန်. နှင်. ဒေသထွက် အစားအစာ အချို.အကြောင်းကို အောက်ပါ Link တွင် သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် ။
Photo by Phyu Hnin Naing – SS Avenue of WKA
ဒီအထဲမှာ ခေါပြင်နှင့် ကောက်ညင်းဆီထမင်းကတော့ အကြိုက်ဆုံး စာရင်းမှာပါတယ်။ ဒီလိုပြောပြရင်းနဲ့ တစ်ရက်လောက် လုပ်ကျွေးရင် ကောင်းမယ်နော်…..
အင်း..ကောက်ညှင်းဆီထမင်းကို ပဲပြုတ်ပူပူလေးဖြူးပြီး လွေးလိုက်ရရင်တော့.. ဂလု…
သများတို့ ကို စောင့်ပါဦးးးး
ဂျီးဒေါ်ဇော်.. ဘာပုလို့ ကောက်ညှင်းအမဲက အဖြူ ထဲ ဈေးပိုကြီးရသလဲဗျ.. စတိုးမှာဈေးနှုန်း ကပ်ထားတာ ၂ဆကွာသဗျာ…
ယှဉ်စားကြည့်ရင် သများက ငချိတ် ပိုကြိုက်၏။
အဟွတ် အဟွတ် စတီကီရိုက်ကို သိပ်သိပ်ကျိုက်တော့
အိမ်သာနဲ့ အဆက်အသွယ် မပြတ်စေနဲ့ ချာချာ။
အိမ်သာနက် (အင်တာနက်) အဆက်အသွယ်ပြတ်တာထက် ပိုခံစားရတယ်။